Izigayo ze-Tube kanye nolayini abakha imigqa benza ukubhangqa kwemvelo. Kanjalo nemigqa yokwakha roll kanye nezigayo zamathubhu. Umphumela osheshayo wokucubungula lezi zihloko ezijwayelekile ngokulandelana okuphambene nalokho ukuguquguquka kokugcizelelwa: ungene kwinani elikhulu nokuhlukahluka kwemikhiqizo efrintiwe kumafreyimu womhlaba womhlaba nozimele womnyango ...
Izinsimbi Zensimbi Ezakhiwe Ngamakhaza, Izinto Ezingahluziwe kanye Nerange Ukuqhathanisa kanye Namazinga Amahle
Imishini yensimbi eyenziwe ngamakhaza, engaba kokuqukethwe? Imishini yensimbi eyenziwe ngamakhaza, esetshenziselwa ukukhiqiza insimbi ebanda kakhulu, uhlobo lwensimbi. Ezintweni zokusetshenziswa, imvamisa, imichilo yensimbi egoqiwe eshisayo noma ebandayo isetshenziswa njengama-billets, futhi ukugoba neminye imisebenzi kuyenziwa ukuthola co ...
Inqubo yokukhiqiza umshini we-longitudinal ilula, ukusebenza kahle kokukhiqiza, izindleko eziphansi kanye nentuthuko esheshayo. Amandla wepayipi evikelekile evulekile ngokuvamile iphakeme kunepayipi eliqondile le-seam welded, ipayipi lingasetshenziswa ukukhiqiza ipayipi elikhudlwana lobubanzi obungenalutho oluncane, kepha ...